हट नायिका सुष्मा कार्कीले गरिन् एक लाखको अफर, यस्ता छन् भित्री कुरा « हाम्रो ईकोनोमी
हट नायिका सुष्मा कार्कीले गरिन् एक लाखको अफर, यस्ता छन् भित्री कुरा
नेपाली समाज यौनका सम्बन्धमा कुण्ठित छ। कतिपय मनोविश्लेषक भन्छन्, ‘नेपालीहरू बाहिरी दुनियाँसँग यौनका विषयमा छिःछिः र दुर-दुर गर्छन्, भित्र भने यौनबाहेक केही सोच्दैनन्।’ यो कुरा नायिका सुष्मा कार्कीलाई पनि लाग्न थालेको छ। केही समययता नेपाली चलचित्रकी हट नायिकाको सूचीमा दरिएकी सुष्माका जति पनि समाचार बने, संयोगवश ती सबै यौनकै वरिपरि थिए।
उनी पनि के कम, आफ्ना शुभचिन्तकहरू जे चाहन्छन् उनी त्यो पूरा गर्न पछि पर्दिनन्। मेरो एउटा साथी छ र केही म्युजिक भिडियोबाट रजतपटमा देखिएकी हट सुष्माले बाहिरी दुनियाँका विषयमा त बोलिन् नै, आफ्ना केही आन्तरिक रहस्य पनि खोलिदिइन्।
सुष्मा कार्की राम्री कि हट ? –
आफ्ना बारेमा के कमेन्ट गरौं, त्यो त अरूले गर्ने हो। ंतैपनि ? -दर्शकका लागि हट, मलाई चिन्नेहरूका लागि चुलबुली प्यारी सुष्मा। ंयसरी दोहोरो चरित्र निर्वाह गर्न पाइन्छ त ? – कला मेरो प्यासन हो। मलाई दर्शकहरूले जुन रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ, त्यो मैले दिनैपर्छ। ंबेडसिन पनि ? -हो। ंकिन यति सार्‍हो खुलेको ? – बाहिर जति सार्‍हो हल्ला छ, त्यति सार्‍हो चाहिँ होइनन्। यस्ता हल्ला कहिले पत्रकारहरूले चलाइदिन्छन्, कहिले म आफैं चलाउँछु। ंकसरी ?
ंकहिले अधर चुम्बन, कहिले बेडसिन कहिले निर्देशकसँगको खटपटजस्ता विवाद आउनुको कारण यही हो ? –
हुँदै नभएको कुरा त आउने होइनन्। कहिलेकाहीँ थोरै बढाइचढाइ हुन्छ, त्यति हो। ंफरक पहिचान बनाउन यसो गरेको हो ? -समयको माग भएर। ंकहिलेकाहीँ आवश्यकताभन्दा बढी चर्चा भयो भन्ने लाग्दैन ? ंजब मान्छेहरूले मलाई नेगेटिभ रूपमा हेर्छन्, त्यो बेला लाग्छ। ंकस्तो नेगेटिभ ? -सबै हिरोइन पैसा लिएर सेक्स गर्छन्, सबैको कसै न कसैसँग सेक्स भिडियो बनेको छ भनेर सोच्ने दर्शकहरू धेरै रहेछन्। यस्ता कुरा मनमा राख्ने मान्छेको कमेन्ट सुन्दाचाहिँ शुद्ध कलाकार भएर बाँच्न गाह्रो छ भन्ने लाग्छ।
ंत्यस्तो सोच राख्ने दर्शकहरूको संख्या कति पाउनुभयो ?
– प्रत्येक महिना दुई-चार जना। कसैले फोनमा कसैले भेटमा र कसैले बाहिरफेर यस्ता कुरा गर्छन्। त्यसैले पनि मैले आफ्नो पुरानो मोबाइल नम्बर परिवर्तन गरें। पहिले म सबैको कलाकार हुँ, किन प्रशंसकहरूलाई अबोइड गरौं भन्ने लाग्थ्यो। अहिले आफ्नो घेरा सीमित बनाएकी छु।
त्यस्तो कुनै फ्यान, जसले सबैभन्दा पीडादायी कुरा गर्‍यो ? –
त्यस्ता नकारात्मक फोन वा सार्वजनिक टिप्पणीका बारेमा तपाईंको धारणा के छ ? –
ंवक्षस्थलमा टाटु खोपाउनुभएको छ, अनि त्यसलाई राम्रैसँग प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, त्यसैले पो हो कि ?
– टाटुमा गुलाफको फूल पनि छ। त्यो पनि त हेर्नुपर्‍यो नि। ंके हो त्यसको अर्थ ? -म हट छु, तर गुलाफको फूलजस्तै कोमल। ंसूर्यको तातोसँग गुलाफको फूल त्यसै पनि ओइलिनु पर्ने, होइन र ? -अलि विरोधाभास लाग्न सक्छ। टाटु बनाउने बेलामा मैले म बाहिर सूर्यजस्तै र भित्र गुलाफजस्तै छु भन्न खोजेकी थिएँ। बुझाइ मान्छेपिच्छे फरक हुँदो रहेछ।
ंतपाईंले आफ्नो वक्षस्थललाई नै किन यति महत्व दिनुभएको ?
– वक्षस्थल मेरो सेक्स सिम्बोल मात्र हो। मलाई त आफ्ना ओठ र आँखा मन पर्छन्। ंकलाकारितामा कहाँसम्म पुग्ने योजना बनाउनुभएको छ ? – बलिउडसम्म। ंकेही प्रयास गर्नुभयो कि सपना मात्रै हो ? – प्रयास गरिरहेकी छु। हिन्दी सिनेमाकी पाश्र्व गायिका सपना अवस्थीसँग सरसल्लाह गरेर अघि बढिरहेकी छु। आफ्नो पोर्टफोलियो बनाइरहेकी छु। हेरौं, कतिसम्म सफल भइन्छ।
ंआइटम डान्सर नै बन्ने ?
-कलाकारको वर्ग हुँदैन। त्यो त भाग्य र निर्देशकले दिने भूमिकामा भर पर्ने कुरा हो। ंलभ ब्रेक भएपछि काममा निकै सक्रिय हुनुभयो, प्रेमले कलाकारितालाई असर गर्दो रहेछ, हो ? -म ब्रेक भैसकेको प्रेमको कुरा गर्न चाहन्न। मैले यो विषयमा धेरै कुरा गरिसकें। मैले प्रेमपछिको अवस्था जान्न चाहेको हो। अँ फरक पर्दो रहेछ। अरूलाई टाइम दिनु नपर्ने, अरूको हस्तक्षेप सहनु नपर्ने जस्तो लाग्यो। मानिस जुन लाइफ बाँच्छ त्यसैमा रमाउनु पर्‍यो नि, होइन ?
ंतैपनि थाकेको बेला माया गर्ने मान्छेको आवश्यकता त परिहाल्छ नि, पर्दैन र ?
– मेरा ४ जना कजन हुनुहुन्छ। मामा-माइजू तथा भाइहरूले पनि उत्तिकै प्रेम गर्छन्। प्रेम गर्न ब्याइफ्रेन्ड नै चाहिन्छ भन्ने रहेनछ। ंब्याइफ्रेन्डले गर्ने माया र अरुले गर्ने मायामा एउटै हो र ? – एउटै हो, केही फरक छैन। ब्याइफ्रेन्डले गर्ने माया विवाहपछिका लागि साँचौला नी, हुँदैन? ंतपाईंजस्ती खुला नायिकाले ब्याइफ्रेन्डको मायालाई विवाहपछि साँच्ने कुरा सुन्दा कतिले पत्याउलान् ? -जति सुकै खुला हुन खोजे पनि म बस्ने यहि नेपाली समाज हो। समाजले के भन्छ भन्दा पनि घर परिवारले के भन्छन् भन्ने कुरा मलाई महत्वपूर्ण लाग्छ। साप्ताहिक यति लोकप्रिय छ कि मेरो फ्यानहरूको हातमा मात्र पुग्दैन, मेरो घरभित्र पनि पुग्छ। साथीभाइसँग गर्ने कुरा र सार्वजनिक गर्ने कुरा फरक पार्नै पर्‍यो नि।
– गर्छु नि। मलाई पनि एउटा हेन्डसम केटा होस्, जसले अब धेरै काम गर्‍यौं, विवाह गरेर बसौं भनोस् भन्ने लाग्छ। आखिर एक दिन त मैले चलचित्र छाड्नैपर्छ। अँ राम्रो कलाकार बन्ने सपना पूरा नभै चाहिँ विवाह गर्दिनँ।
नेपालमा कोरोना जित्नेको संख्या १५५ पुग्यो
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पनि यसलाई जित्नेको संख्या पनि उसरी
देशभर क्वारेन्टाइनमा ५५ हजार २८२ जना
देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा अहिलेसम्मकै उच्च संख्यामा मानिस क्वारेन्टाइनमा राखिएका छन्। स्वास्थ्य तथा
नेपालमा थप ९० जनामा कोरोना, संक्रमितको संख्या ७७२ पुग्यो
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ९० जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण पुष्टि भएको
नेपालमा थप २२ जनामा कोरोना
रौतहटमा थप २२ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमण पुष्टि भएको छ ।